Maxaa hor taagan inay Arsenal u fasaxdo Mesut Ozil ku biirista naadiga Fenerbahce? – Gool FM
(London) 09 Jan 2021. Waxaa dhowaan la baahiyay in Mesut Ozil uu heshiis la gaaray kooxda Fenerbahce, isla markaasna uu si buuxdo ugu biiri doono bishan, balse waxaa jira dood iyo diidmo ka socota dhanka Arsenal oo ku aaddan fasax xiddigan.
Jariiradda The Guardian ee ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa sheegaysa in Gunners ay caqabad ku tahay dhaqaaqa xiddigan ee dhanka Turkiga.
Arsenal ayaa ku adkeysaneysa inaysan bixin doonin mushaharka xiddigan ee inta ka harsan qandaraaskiisa, iyagoo taas baddelkeeda dooneysa in heshiiskiisa si laba daraf ah loo burburiyo.
Sida caadiga ah, Ozil ayaa xaq u leh inuu jeebka ku shubto mushaharkiisa bilaha ka dhiman qandaraaskiisa haddii la iibinayo, sidaas darteed, Gunners oo ka duuleysa xaaladdaas ayaa isku dayaysa inay si is af garad ah ku burburiso heshiiskiisa, isla markaasna uu ka taqalluso mushaharka uu kooxda ku lahaa.
Qandaraaska xiddigii hore ee Real Madrid ayaa dhammaan doona 30-ka Juun ee sanadkan, waxaana uu toddobaadkaa ka qaataa Emirates Stadium lacag dhan 350 kun oo gini, balse ma uusan u ciyaarin kooxdan tan iyo daba-yaaqadi xilli ciyaareedkii hore, taasoo dardar gelisay inuu xirfaddiisa meel kale u weeciyo.
Shaxda rasmiga ah ee kulanka Granada vs Barcelona oo la soo saaray... (Messi, Griezmann iyo Dembele oo weerarka Barca kusoo billawday)